Ezemidlalo Ukufaneleka, Ithenisi
Tommy Haas - Umdlali jikelele, okuyinto inqubo wehlukile ikakhulukazi. Tennis umdlali baziwa Ikhono lokusebenza ngempumelelo njengoba emide, futhi ngaphansi net. Haas has a forehand enamandla, ukusebenza okumangalisayo okuyinto njalo elijabulisa izilaleli.
Kudabuka khona ithenisi abadumile German e Hamburg Apreli 3, 1978. Izifundo ithenisi kuqala umfana wayesekhona iminyaka 4 ubudala uyise, ngubani ekuqaleni wakhuluma umeluleki wakhe siqu.
Lapho Tommy kwagcwaliseka iminyaka 11, lo mndeni wanquma ukuthuthela e-United States. Kukulo muzi lapho, e-Florida, kwaku omunye engcono ithenisi zezifundiswa ngenxa wezwe Nika Bolleteri.
Kakade lapho ngineminyaka engu-17 Tommy Haas uvele yokugcina ethandwa Orange Bowl mqhudelwano. Nokho, ekulweni guy indondo kwadingeka ngiyeke ukucula abadlali abanolwazi kakhudlwana Mariano Zabaleta.
Tommy Haas - tennis player, owathuthela ku isigaba abadlali professional ngo-1996. aseqala Tournament for Umuntu waqala mncintiswano e-Indianapolis, lapho kwake kwaba lucky ngokwanele ukuba afinyelele esigabeni quarter. Nokho, ithalente abasha ngaphezulu uye ningagudluzwa kusukela yegridi mqhudelwano wamletha omunye izinkanyezi ezinkulu ithenisi emhlabeni ngesikhathi - Pete Sampras.
umphakathi bakhangwa Tommy Haas mathupha sakhe ngonyaka. Kulo mqhudelwano elilandelayo e Lyon, okwenzeka ngo-1997, beat engu-19 ubudala Yevgeny Kafelnikov, eyayinecilongo isimo yethenisi lwesikhombisa zomhlaba.
Imiphumela isizini yokuqala njengendlela onguchwepheshe Haas waba nesikhundla 50 th rankings emhlabeni e, lapho umdlali Avuka 155 endaweni th.
I yimpumelelo kakhulu umsebenzi wakhe ngoba Tommy Haas ubonakele ngo-2000, okuyinto baletha lendondo yesiliva we-Olympic Games in Australia e yengcebo umsubathi. Ngenxa ugqozi lempumelelo sokuqala esibalulekile career kanye nomsebenzi usandisile ukuqeqeshwa, ithenisi umdlali waqala njalo ukufinyelela esigabeni sokugcina kule midlalo "Grand Slam". Ngakho, ngaphambi nje Tommy Haas lizimelele ku isikhundla wesibili e global offset osenyameni olulodwa.
Ngemva kwalokho Haas njalo ukhathazwa ukulimala, okwaphumela shift sasivumela okusheshayo igama lakhe ezikhundleni eziphezulu kule simo the best ithenisi abadlali emhlabeni. Mthetho ochungechungeni umncintiswano "Grand Slam" Tommy Haas force egcwele yaze yaqala ngo-2009. Nokho, umdlalo kwaba nomsubathi akuyona umbukwane ngakho, futhi imiphumela kwesokunxele okuningi okufanele oyifunayo. Nokho, umbono ithalenta esidlule namanje ngokuvamile washelela phezu enkantolo. Ngakho-ke Haas wahlala Umphikisi asabekayo ngenxa yimuphi umdlali webhola lomphebezo kuze kube sekupheleni umsebenzi wakhe.
Ukuze eJalimane Tommy Haas kudlalwa 31 umdlalo. Umdlali ngenani 19 kwi 7 ukunqotshwa for the team yezwe.
Kuyaphawuleka ukuthi ngenxa yokulimala njalo ithenisi umdlali labetibambile umdlalo penultimate e isimo ukuqoqwa ngo-2007, futhi umdlalo wokugcina ku squads kazwelonke kwenzeke kuphela 2012 ngaye.
I nesithakazelo Tommy Haas? Tennis isinyathelo ngenxa umdlali akuyona into kuphela sína ekuphileni. Ngesikhathi nomsubathi uye wabonisa yathuthuka ngempela umxhwele igalofu. Ngaphezu kwalokho, i-scope ungachithi zihlanganisa ithenisi ukushayela ngesivinini ezimotweni, kanye Ukushushuluza amanzi.
Haas imele fan wangempela football. Izintandokazi umsubathi ithimba "Bavaria" (Munich). Kepha ithenisi, kuyinto isithombe umdlali njalo kudlalwa Countryman yakhe - edume Boris Becker.
Ngo-2007, ngemva uchungechunge ukufana yimpumelelo, Haas uvele wokugcina, "Davis Cup", lapho iqembu German uvele imbangi Russian eqenjini lesizwe. Nokho, ngenxa ukugula okubangelwa ukuqunjelwa, Tommy akazange avele kwendawo yokudlalela. Ukungabikho ngempoqo umdlali ohamba phambili bese ophoqelelwe induna ithimba German kazwelonke isiphakamiso mayelana kungenzeka ubuthi Haas abameleli ohlangothini Russian. Nokho, ubufakazi ukuthi awuzange umthole.
Tommy Haas wathola waphuka amaningana namaqakala, ukuthi, eqinisweni, njengoba kubonakala kula ukwehla kwemiphumela yayo ngalo mdlalo. Tommy yokuqala yagqashuka ngo-1995. Ngemva sokubuyiselwa yimpumelelo ngo-1996, umdlali waphula iqakala yakhe isivele ngakolunye ngezinyawo.
Peter Haas - uyise Tommy sika, kuyinto wangaphambili iqhawe emhlabeni e-judo. Ukuze kuholele impumelelo indodana yakhe, kamuva yaphenduka abaqeqeshi ithenisi.
Onjiniyela angathembekile futhi HBC, kanjani ukuba wenze?